भ्रष्टाचारीलाई घरघरबाट बहिष्कार गरौँ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
भ्रष्टाचारीलाई घरघरबाट बहिष्कार गरौँ
२०७० असार ३१, सोमबार ०४:३४ गते
[author image=”https://si0.twimg.com/profile_images/378800000052193604/eccd879187da39d7cb4683f76e46357e_bigger.jpeg” ]राधेश्याम खतिवडा [/author]मेरो यो विचार पढिरहँदा तपाईंलाई लाग्न सक्छ, अरुलाई अनुरोध गर्ने तर आफैँचहिँ कत्तिको सदाचारी होला ! सुरूवातमै प्रस्ट पारौँ, म भ्रष्टाचारको कडा विरोधी हुँ । यो दुनियाँमा हरेक मानिस भ्रष्टाचारी हुन्छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो, मात्राको मात्र फरक हो । विषय र प्रकृतिअनुसार धेरै या थोरै भ्रष्टाचार गर्ने मानिस विश्वभरि नै छन् । त्यसैले म आर्थिक रुपमा भ्रष्टाचार गर्दै नगर्ने र अन्य विषयमा बाध्यताले थोरैमात्र भ्रष्टाचार गर्नु परेको नागरिक हँु । अझै कम वा शून्य भ्रष्टाचारी बन्ने प्रयासमा रहेको नागरिक पनि हँु ।
भ्रष्टाचारको विरूद्धमा लागेको लामो समयको अनुभव र वरिपरि भ्रष्टाचारीहरुको चहलपहललाई अध्ययन गर्दा मैले यो विषयमा धेरै वुझ्ने अवसर पाएको छु । भ्रष्टाचार भन्नेवित्तिकै आममानिसले आर्थिक विषयलाई मात्र लिएको पाइन्छ । नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत विविध विषयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यहाँ आर्थिकभन्दा पनि सबैभन्दा डरलाग्दो भ्रष्टाचार त नीतिगत भ्रष्टाचार छ । तर, सत्य कुरा के हो भने जुनसुकै विषयमा अनियमितता गरे पनि त्यो आखिर आर्थिकसँग जोडिएको हुन्छ नै ।
आजभोलि हाम्रो समाज यस्तो बनिसक्यो कि जो स्वाभिमानको कुरा गर्छ, ऊ अपमानित हुनु परिराखेको देखिन्छ । जो भ्रष्टाचारविरूद्धको कुरा गर्छ, ऊ समाजको हाँसोको पात्र बनिरहेको देखिन्छ । जसले इमानको कुरा गर्छ, ऊ समाजमा बेइमान बन्नु परिरहेको देखिन्छ । पहिलापहिला बद्मासी गर्नेहरु लुकेर हिँड्दथे, तर आजभोलि इमानदारहरु लुकेर हिँडन बाध्य छन् । इमानदारहरु समाजमा बिक्न छाडेका छन् । यी सबै कुरा साँच्चीकै एकछिन गमेर सोच्ने हो भने हामी सबैले महसुुस गरेकै कुरा हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्दै यही समाजमा धेरै काम पनि हुने गरेका छन् । हाम्रो समाजमा कहिल्यै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन, किनकि विश्वको अति कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक मात्र छ । भ्रष्टाचारशून्य भएको मुलुक अहिलेसम्म छैन । त्यसैले अब नियन्त्रण होइन, न्यूनीकरणको अभियान आवश्यक छ ।
पछिल्लो पटक टान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले गरेको सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचारको अवस्था यस्तो छ । घूस दिने काम विश्वभर अझै उच्च रहे पनि नागरिक यसविरूद्ध लड्न तयार रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । एक वर्षको अवधिमा प्रत्येक चार व्यक्तिमा एक व्यक्तिले घूस दिएको दर्साइएको छ ।
ग्लोबल करप्सन ब्यारो मिटर २०१३ अनुसार एक सय सात मुलुकका एक लाख १४ हजार व्यक्तिहरुसँग गरिएको सर्वेक्षणले विश्वमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाएको छ । नेपालमा पनि सर्वेक्षण भएको थियो, नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टमा राजनीतिक दललाई देखाइएको छ । निजामती कर्मचारी, प्रहरी, न्यायपालिका, गैसस, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार माध्यमलगायतका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार वढ्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
न्यूनीकरणचाहिँ कसरी गर्ने त, हामी सबैको चिन्ताको विषय यही हो । माथिबाटै सुधार हुनुपर्छ, तलबाट सुधार सम्भव छैन । अधिकांशको विचार यही सुन्ने गरिन्छ । तलका मानिसले रूपैया सय÷ पचास खाएको मात्रै देखेर र लेखेर भएन, माथिबाट लाख÷करोड खानेहरुको देख्नु र लेख्नुप¥यो । यी र यस्तै गुनासाहरु बढी आउने गरेका छन् । मेरो विचार फरक छ, माथि पनि तलसँग जोडिएको हुन्छ । हरेक मानिस माथि पुग्ने भनेको तलैबाट हो । अब तलका मानिस सचेत हुनुपर्छ । जो मानिस माथि पुगेर भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, उसको उद्गमस्थान तलै हुन्छ । ऊसँग जोडिएका हरेक विषय तल नै रहेका हुन्छन् ।
त्यसैले, हामी सबैले सामाजिक रुपमा अभियान चलाउन आवश्यक छ । आफ्नो छिमेक, घरवरपर नातागोता, इष्टमित्रहरु हिजो कुन अवस्थामा थिए, आज कहाँ पुगेका छन् ! हिजोको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो, आज कस्तो भएको छ ! कमाइएका भनिएका सम्पत्तिको स्रोत खुलेका छन् कि छैनन् ? हरेक विषयमा चिनजानमा रहेका मानिसका विषयमा थाहा हुन्छ नै ।
परिवारमै पनि भ्रष्टाचार गर्नमा प्रोत्साहन पो भइरहेको छ कि ? हो, आजभोलिको समाजमा हरेकका मातापिताले जसरी भए पनि छोराले पैसा कमाउनैपर्छ भन्ने धारणा राखेको पाइन्छ । आज छिमेकीसँगको प्रतिस्पर्धामा आर्थिक लाभका निम्ति परिवारबाटै नाजायज प्रेसर दिइने गरेको उदाहरण पनि भेटिएका छन् । त्यसैले, परिवारका मातापिताले आफ्ना छोराहरुलाई साँच्चीकै सदाचारी र स्वाभिमान हुन साँच्चीकै सिकाइदिने हो भ
ने यो समाजमा धेरै भ्रष्टाचार कम हुने देखिन्छ । त्यसैले, म सम्पूर्ण मातापितालाई कृपया यो अभियानमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्छु । हिम्मतका साथ अब हामीले साँच्चीकै भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना गर्ने नै हो भने भ्रष्ट बनाउन प्रेसर गर्ने मातापिता छन् भने अब उनीहरुका बारेमा सोच्नैपर्छ । छोरो भ्रष्ट छ भने मातापिताले बहिष्कार किन नगर्ने ? सुरूवात आफैँ र आफ्नै घरबाट नभए कहाँबाट हुन्छ ?
परिवारभित्र नै अर्को भ्रष्टाचारका कारण महिला रहेको पाइन्छ । आवश्यकताभन्दा बढी अपेक्षा राखिदिनाले एउटा पुरूष बाध्य भएर भ्रष्टाचार गर्न लाग्नु परिराखेको विभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् । इमानदारिताका साथ हामी आफ्नै समाजको कुरा गर्ने हो भने पनि कता–कता यो देख्न सकिन्छ । महिलाहरुले पनि अब साँच्चीकै समाजलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने हो भने यो विषयमा सोच्नुपर्ने हो कि ? यदि श्रीमान्ले स्रोत नखुलेका वस्तु र नाजायज आर्थिक लाभ लिएका छन् भने प्रश्न किन नगर्ने ? पटकपटक सम्झाउँदा पनि मान्दैनन् भने त्यस्ता भ्रष्ट श्रीमान्लाई अब बहिष्कार किन नगर्ने ?
परिवारभन्दा बाहेक समाजको कुरा गर्दा हाम्रो समाज पैसाको पछि घुमिरहेको पाइन्छ । आँखैअगाडि जानीजानी भ्रष्टाचार गरेर समाजमा जो धनीमानी भई टोपलेको छ, ऊ नै गाउँको नेता, उसले भनेको सबैले मान्नुपर्ने, ऊ नै समाजको सबैभन्दा दानी, ऊ नै समाजको सबैभन्दा धर्मात्मी, ऊ नै समाजको सबैभन्दा सेवक भइरहेको छ । तर, त्यो मानिस कसरी त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो ? उसको सम्पत्तिको स्रोत के हो ? कसैले खोजेको पाइन्न । लुटेर, चोरेर, थुतेर, धुतेर जसरी कमाए पनि यो समाजमा कमाउनेकै मात्र शानमान छ भने अनि साम, दाम, दण्ड, भेद जे प्रयोग गरेरै भए पनि कमाउनतिर मानिस किन लाग्दैन ? आज हाम्रो समाजको ठूलो रोग यही हो । त्यसैले त इमानदारहरुलाई बेइमान बनाइएको छ, अनि बेइमानहरु इमानदारहरुका अगाडि शानमानका साथ हिँडिरहेका छन् । अब पनि हामीले यो विषयमा सोच्नुपर्दैन र ?
समाजमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि त्यति धेरै कठिन नै छैन । तथ्य र प्रमाण नभए पनि आँखैअगाडि छर्लंग हुनेगरी अनियमितता गर्नेहरुलाई सामाजिक रुपमा बहिष्कार गर्ने नीति लिनेमात्र हो भने धेरै भ्रष्टाचार कम हुन्छ । त्यस्ता मनिससँगको संगत कम गर्ने गरौँ । त्यस्ता मानिसका परिवारसँग नाता जोड्दा हौसिने हामी नाता जोड्न होइन, तोड्नतिर लागौँ । सामाजिक संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा असहयोग गरौँ । उसका घरमा हुने हरेक सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सहभागी नभइदिऊँ । हरेक विषयमा असहयोग गरौँ । नैतिक रुपमा असहयोग गरौँ । नजानिँदो पाराले उसलाई मैले अनियमितता र भ्रष्ट चरित्रका कारणले समाज मेरो पक्षमा छैन भन्ने पारौँ । त्यसपछि अन्य मानिसहरुमा पनि भ्रष्टाचार कम गर्ने वा सके त गर्दै नगर्ने बानीको विकास हुन्छ ।
तर हामी लुटेर, चोरेर, ठगेर जे गरेर भए पनि कमाएर ल्याएको मानिससँग संगत गर्न पाइयो भने हाँसीखुसी र संसारै यही हो भन्ने चंगुलमा फस्छौँ । हाम्रो बाध्यता पनि छ । मन्दिर, विद्यालय बनाउन प¥यो भने त्यस्तै मानिसले धेरै दान दिन्छन् । अनि त्यही भ्रष्टाचारीलाई अगाडि लगाएर जयजयकार लगाएर हिँड्छौँ । बरू मन्दिर नबनाए के हुन्छ ? बरू स्कुलको भवनको तला नथपे के हुन्छ ? यो देशमा भ्रष्टाचार आधामात्र कम हुने हो भने त्यस्ता मन्दिर र स्कुल सरकारले नै बनाउन सक्छ । किन भ्रष्ट धनीमानीको मुख ताकेर बस्नुपर्छ ?
त्यस कारण, आज र अहिल्यैबाट सबैभन्दा पहिला आफूले भ्रष्टाचार नगरौँ, गर्दै नगरौँ । अनि आफ्नो परिवार, नातागोता, इष्टमित्र, छरछिमेक, गाउँघर वरपर बस्ने हरेक मानिसको हिजोको अवस्था र आजको अवस्था गहिरोसँग मूल्यांकन गरेर पत्याउनै नसकिने गरी, स्रोत नै नखुल्ने गरी सम्पत्ति कमाएर बसेका छन् भने मनबाटै बहिष्कार गरौँ । अनि व्यावहारिक रुपमा चरणबद्ध ढङ्गले हरेक कुरामा उनीहरुलाई मानसिक प्रभाव पर्ने गरी बहिष्कार गर्दै जाऊँ । घरघरबाटै, भाइभाइवाटै, बाबुछोराबाटै, अनि श्रीमान्श्रीमतीबाटै भ्रष्ट आचरण भएकालाई बहिष्कार गरौँ र गरिहालौँ, नत्र ढिला भइसकेको छ ।